नयाँ दिल्ली, ९ जेठ । भारतीय लोकसभाको चुनावको नतिजाले यसपटक गठबन्धनको राजनीतिलाई पनि पछाडि धकेलेको छ । यूपी, विहार, महाराष्ट्र र कर्नाटक जस्ता राज्यहरुमा विपक्षी दल गठबन्धन गरेर बिजेपीका विरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । उनीहरु सबै चुनावी मतपरिणाममा नरेन्द्र मोदीको करिश्माका अगाडि धराशायी भएका छन् । न गठबन्धन चल्यो न जातिको दाउ । सबैतिर मोदी नै अगाडि देखिए ।
यहाँ हामीले नवभारत टाइम्समा प्रकाशित विश्लेषणलाई आधार बनाएर बिजेपी र मोदीको जितका कारणहरु खोतल्ने प्रयास गरेका छौं ।
मोदीको शक्तिशाली छवि
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शक्तिशाली नेताको छवि र पूरै देशमा उनको सर्वमान्य नेताको रुपमा पेश गर्‍यो भाजपाले । नोटबन्दी, जीएसटी र आतंकवादको विरुद्ध उनको कडा फैसलाले देशमा उनको छवि एक शक्तिशाली नेताको रुपमा बन्यो । विपक्षीहरु मोदीको अगाडि कमजोर र शक्तिहिन देखिन थाले । यो निर्वाचन परिणाममा मोदीको शक्तिशाली छविको पनि अत्यधिक योगदान छ ।
जाति चलेन, काम चल्यो
यूपी, बिहार, कर्नाटक र महाराष्ट्र जस्ता राज्यमा विपक्षी दलहरुको गठबन्धन नराम्रोसँग असफल भयो । जातिको नाममा बनाइएका गठबन्धनलाई यी राज्यहरुमा सफलता मिलेन । जनताले केन्द्र सरकारको योजनाको पक्षमा जमेटर भोट दिए । यी सबै राज्यमा जातिय गठबन्धनहरु नराम्ररी पछारिए ।
चुनावमा मोदीले राष्ट्रवादको नारा दिए । चुनावी र्‍यालीसम्म आइपुग्दा पनि मोदीले राष्ट्रवादको नारा छाडेनन् अपितु झन् चर्काए । आतंकवादको विरुद्ध उनको सरकारले कडा कदम अगाडि बढाइरहेको उनको जिकिर थियो । जनताले मोदीको यो अपिललाई पत्याए र लोकसभा चुनावमा बिजेपीलाई २०१४ मा भन्दा अगाडि बढाए ।
बालाकोट एयर स्ट्राइकको असर
पुलवामा आतंकवादी हमलापछि वायुसेनाद्वारा पाकिस्तानको बालाकोटमा भारतीय वायुसेनाको एयर स्ट्राइकले भारतमा मोदीको छवि थप शक्तिशाली बनायो । जसरी भारतीय वायुसेनाले पाकिस्तानमा घुसेर जैशको आत‌कवादीको अखडालाई ध्वस्त बनाए, यसले देशमा मोदीको आतंकवादविरुद्धको कदमको खुलेरै प्रसंशा भएको थियो । चुनावको क्रममा मोदीले उक्त हमलाको अत्यधिक मसला बनाए र बलियो सरकारको पक्षमा विपक्षीविरुद्ध निशाना सोझ्याए ।
लोकसभा चुनाव २०१९ मा मोदीको आफ्नो पार्टी र गठबन्धनका लागि ब्राण्डको रुपमा प्रस्तुत गरियो । बिजेपीको लागि मात्र होइन, एनडिए गठबन्धनका लागि मोदीले जमेर भोट मागे । एनडीए गठबन्धनमा सहभागी ३६ दलहरुले पनि मोदीको नाम एकदमै दोहोर्‍याए । यतिसम्म कि कयौं सिटमा एनडिएका प्रत्याशीले पनि मोदीको नाममा भोट मागेको पनि देखियो ।
जनमुखी योजनाको फाइदा
केन्द्रीय योजनाहरु जस्तै- आयुष्मान भारत, उज्यालो, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत अन्तर्गत शौचालयका निर्माणजस्ता योजनाहरुले आधारभूत तहमा बिजेपीको पक्षमा मतदाताहरु एनडीए गठबन्धनको नजिक हुन सघाए । यी योजनाको स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन र यसमा भ्रष्टाचार कम हुँदा पनि एनडीए गठबन्धनको लागि सकरात्मक पक्ष बन्यो । मोदीले पनि आफ्नो चुनाव प्रचारमा केन्द्रका यी योजनाबारे खुबै बोले । चुनाव परिणाममा बिजेपीलाई यी कुराहरुले निकै सघाएको देखिन्छ ।
हरेक राज्यमा फरक समीकरण
बिजेपीले लोकसभा चुनावमा हरेक राज्यका लागि फरक फरक रणनीति बनाएको थियो । यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक बाहेक ओडिशामा बिजेपी अलग-अलग रणनीतिका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो । बंगलामा बिजेपीको रणनीति एकदमै कामयावी भयो । त्यहाँ ममता बनर्जीको जरो उखेल्न सफलता हासिल भयो । यसका साथै यूपी र बिहारमा एनडीए गठबन्धनलाई अत्यधिक मतान्तरले अगाडि उभ्याउन सफल भयो । महाराष्ट्रमा बिजेपी-शिवसेना गठबन्धन पनि भारी मात्रामा सफल रह्यो ।
सहयोगीलाई विशेष जोड
२०१४ को चुनावपछि यो चुनावमा बिजेपीले आफ्नो सहयोगीलाई एकदमै ध्यान दियो । महाराष्ट्रमा शिवसेनासँग भएको पुरानो मतभेद भुलेर पार्टी लोकसभा चुनावमा उहीसँग सहकार्य गर्‍यो । यसका साथै बिहारमा जदयूलाई आफूले जितेको सिट पनि दियो । बिहार र महाराष्ट्रमा बिजेपीलाई यसको प्रशस्त लाभ मिल्यो । यसका साथै बिजेपीले पूर्वी भारतमा कयौं दलसँग गठबन्धन गरेर जित सुनिश्चित गर्न सफल भयो ।
यूपी र बंगालमा पहिलेदेखि कै तयारी
उत्तर प्रदेशमा एसपी र बीएसपीको गठबन्धन चलखेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बिजेपीले राज्यमा ५०+ मतको लागि कोसिस सुरु गरेको थियो । बिजेपीलाई यूपीमा उक्त गठबन्धन गर्न सकिने पहिलादेखि नै जानकारी थियो । पार्टीले राज्यमा केन्द्रका जनमुखी योजनाहरुको अत्यधिक प्रचार गर्‍यो र यसको लाभ सिंगो गठबन्धनलाई नै मिलोस् भन्ने शुभेच्छा पनि राख्यो । पार्टीको यो रणनीतिले काम गर्‍यो पनि । पश्चिम बंगलाका लागि बिजेपीले २०१७ मा ओडिशापछि तयारी सुरु गरेको थियो । पश्चिम बंगालमा बिजेपीको तयारीले काम गर्‍यो र ममताको गढ भत्काउन सफलता मिल्यो ।
नरेन्द्र मोदीको अगाडि विपक्ष विकल्पहिन रह्यो । विपक्षीसँग मोदीसँग टक्कर गर्ने शक्तिशाली नेता भएनन् । कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी पिएम मोदीको अगाडि कमजोर सावित भए । यसका साथै विभाजित विपक्षले मोदीको सामना गर्न सकेन । विपक्षीसँग अन्तरनिहित विभाजनका कारण मोदीको अगाडि चुनौती बनेर उभिन सक्ने अवस्था रहेन ।
राहुललाई मोदीसँगको प्रतिष्पर्धीको रुपमा उभ्याए पनि उनको कमजोर भाषण शैली, मानिसलाई संगठित गर्ने तरिकाका अगाडि मोदी थप शक्तिशाली देखिए ।
हैदरावाद इन्काउन्टरः यसरी एक हप्तामै तालीमा फेरियो गाली
तनाव अचाक्लि बढ्यो ? घटाउन अपनाउन सक्नुहुन्छ यी ८ उपायहरु
मजदूरी गरी छोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहने ‘नायक पिता’ : आफैं स्कुल ल्याउने/लैजाने गर्छन्
समाजवादी-राजपा एकताः हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो
उपनिर्वाचनमा सिकेले ल्याएको ‘१००६’ मतको अर्थ
डढेलोको प्रभावः सिड्नीको वायु प्रदूषण दिल्लीको भन्दा खराब, सूर्यको रुपै फेरियो (तस्बिरसहित)
वैकल्पिक दलहरुको स्थिति लज्जास्पद र खिल्ली उडाउन लायक नै हो त ?
उपनिर्वाचन २०७६: कहाँ कसले बाजी मारे ? (सूचिसहित)
उपनिर्वाचनको सन्देशः पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच भावनात्मक एकता भएकै छैन
अस्वस्थ प्रधानमन्त्री र सम्भावित शक्ति–संघर्ष
आलम प्रकरणः के पीडितको नयाँ निवेदनले नयाँ अवस्था सिर्जना गर्ला ?
सीमाविवाद केन्द्रित सर्वपक्षीय बैठकः सत्तासिनहरुले यो कुरा नबिर्सिऊन्
भारतको ‘५७ वर्षअघि’को र ‘नयाँ नक्सा’ तुलना गर्दा जे देखियो …
११ हजार वैज्ञानिकको एउटै स्वर- ‘अकल्पनीय अवस्था आउन सक्छ, जलवायु संकट घोषणा गरौं’
राबी पिरजादाः ‘आत्मघाती भेस्ट’ लगाएर मोदीलाई धम्की दिने साहसी पप स्टार
बलात्कारीको लिङ्ग टोकेर भाग्न सफल एक साहसी महिलाको बयान
तिहारमा चिल्लो, फलफूल, मिठाई र पटाका
विदेशी हिन्दूलाई नागरिकता दिने गरी विधेयक पारित, अमित शाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग
एजेन्सी, २४ मंसिर । भारतको लोकसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको छ । सोमबार लोकसभामा भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा...